Igceke Elidala - Ukuthula Nokuzola enkabeni yedolobha - I-Airbnb
Igceke Elidala - Ukuthula Nokuzola enkabeni yedolobha
Potenza, Basilicata, i-Italy
Indlu encane ibungazwe ngu-Raffaela
Endaweni yedolobha, i-studio esisha sha endaweni ethulile nenkundla futhi enefenisha enhle. Inesitofu, i-Wi-Fi nakho konke ukunethezeka . Ukupaka kwangasese okunesango likagesi nekhamera yokuqapha. I-Potenza isesimweni esifanele kulabo abafuna ukubona i-Basilicata njengoba ivela ezindaweni ezithandwayo esifundeni sase-Basilicata: i-Matera, i-Pietrapertosa, i-Castelmezzano, i-Maratea, i-Metaponto, i-Pollino National Park, indiza ye-Angel nokunye okuningi.
Istudiyo esihle, esizimele ngokuphelele futhi esisanda kulungiswa, esisenkabeni yedolobha kodwa endaweni ethulile evikelwe emgwaqeni. Ngokuhlala isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezingu-7, amashidi namathawula kumelwe ashintshwe masonto onke.
4.56 · 16 okushiwo abanye
Ukuphonsa itshe ezitebhisini ze-Piazza Vittorio Emanuele II kanye nama-elevator omphakathi axhumanisa ne-Piazza Prefecture. Endaweni eseduze ungathola amakhemisi, amabhange, amabha, izimakethe ezinkulu, izingubo zokugqoka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Potenza namaphethelo